အတွေးအတွက်အစားအစာ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားကျောင်း
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်က ပြောင်မြောက်သောစကားကြောင့် ကျော်ကြားခဲ့သော လူရွှင်တော်တစ်ဦးသည် အသက် ၉ နှစ်၊1. မွေးနေ့။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ၎င်း၏ ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟများ အားလုံး တက်ရောက်ကြပြီး သတင်း ထောက်များ လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ပါတီတွင် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်၊ သူ့အတွက် ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းမှာ "မင်းရဲ့အသက်တာရှည်ခြင်းကို ဘယ်သူ့အတွက်၊ မင်းဘာကို သတ်မှတ်တာလဲ။" မဆိုင်းမတွဘဲ လူရွှင်တော်က "အသက်ရှုနေတယ်!" ဘယ်သူက သဘောမတူနိုင်လဲ။ ကြှနျုပျတို့ ... နိုငျတယျ ...
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ထင်ရှားသောအခန်းငယ်တစ်ပိုဒ်ရှိပြီး၊ ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အကြောင်း ပေါလုသည် ဂရိလူတို့ကို မိုက်မဲခြင်းနှင့် ယုဒလူတို့အား ပြစ်မှားခြင်းအဖြစ် ပြောဆိုခဲ့သည် (၁ ကော၊ 1,23) သူဘာကြောင့် ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာ နားလည်လွယ်တယ်။ အမှန်မှာ၊ ဂရိတို့၏အမြင်တွင်၊ ဆန်းပြားသော၊ ဒဿနိကဗေဒနှင့် ပညာရေးတို့သည် အလွန်မြင့်မြတ်သော လိုက်စားမှုဖြစ်သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံထားသူတစ်ဦးသည် အသိပညာကို မည်သို့တင်ပြနိုင်မည်နည်း။ ဂျူးတွေ စိတ်ထဲ က အော်သံ နဲ့ ...
အိုးထိန်းသမားကို ဘုရားသခင် ယေရမိ အာရုံစိုက်လာတဲ့အခါ (ယေ. ၁ ဒီဇင်ဘာ.8,2-၆)? ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အစွမ်းထက်သောသင်ခန်းစာတစ်ခုသင်ပေးရန် အိုးထိန်းသမား၏ရုပ်တုနှင့် ရွှံ့ရုပ်တုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အိုးထိန်းသမား၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ရွှံ့ပုံသဏ္ဌာန်တူသောစာများကို ဟေရှာယ ၄ တွင်တွေ့ရှိရသည်။5,9 နှင့် ၆4,7 ရောမဘာသာတွင်လည်း ရှိသည်။ 9,20-21. ရုံးမှာ လက်ဖက်ရည်အတွက် သုံးလေ့ရှိတဲ့ အကြိုက်ဆုံး ခွက်တွေထဲက တစ်ခုမှာ မိသားစုပုံပါပါတယ်။ ငါသူမကိုကြည့်နေရင်း...
အသားအရေနူးညံ့သိမ်မွေ့မှုအတွက်ကုထုံးကိုစတင်ယူသောအခါလူနာ ၁၀ ယောက်တွင်သုံး ဦး သည်ဤဆေးကိုမတုံ့ပြန်ခဲ့ဟုကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးကိုအချည်းနှီးသာသောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဖူးပါ။ ငါအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးခြင်းနှင့်ငါမနှစ်မြို့ဖွယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိခဲ့ကြောင်းငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သောကြောင့်ဆရာဝန်ကကျွန်မကိုဘယ်တော့မှရှင်းပြခဲ့သည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
ခရစ်ယာန်များစွာကဘုရားသခင်သည်ထိန်းချုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ အတွက်အစီအစဉ်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ငါတို့အတွက်ဖြစ်ပျက်သမျှဟာအဲဒီအစီအစဉ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ။ အချို့ကစိန်ခေါ်မှုများအပါအ ၀ င်တစ်နေ့တာ၏အဖြစ်အပျက်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကငါတို့အတွက်စီစဉ်ပေးသည်ဟုပင်ငြင်းကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်ကမင်းအတွက်မင်းရဲ့ဘ ၀ ရဲ့မိနစ်တိုင်းကိုမင်းအတွက်စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကမင်းကိုလွတ်မြောက်စေလား၊ ဒါမှမဟုတ်ငါလိုမင်းရဲ့နဖူးကိုပွတ်ပေးသလား။ သူကငါတို့ကိုလွတ်လပ်စွာဆန္ဒမပေးဘူးလား။ ငါတို့လား ...
အဝတ်လျှော်ခြင်းသည်သင်လုပ်ရန်လိုသည့်အရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကယ်၍ သင်ကအခြားသူအားသင့်အတွက်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါက။ အဝတ်အစားများကိုခွဲထားရမည် - အဖြူနှင့်ပိုမိုပေါ့ပါးသောမှောင်မိုက်သောအရောင်များကိုခွဲထားသည်။ အဝတ်အစားအချို့ကိုနူးညံ့သောအစီအစဉ်နှင့်အထူးဆပ်ပြာဖြင့်ဆေးကြောရန်လိုအပ်သည်။ ငါကောလိပ်မှာကြုံခဲ့ရသလိုဒီခက်ခဲတဲ့နည်းကိုသင်ယူဖို့ဖြစ်နိုင်တယ် ငါအသစ်တစ်ခုကိုတင်လိုက်တယ်။
ဂျယ်ရမီကိုပုံသဏ္ဌာန်မကျသည့်ခန္ဓာကိုယ်၊ နှေးနှေးကွေးရောဂါနှင့်နာတာရှည်ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်သောရောဂါဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သူ့မိဘများကသူ့ကိုသာမာန်ဘဝဖြင့်နေထိုင်ရန်တတ်နိုင်သမျှအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့ပြီးပုဂ္ဂလိကကျောင်းသို့ပို့ခဲ့သည်။ အသက် ၁၂ နှစ်တွင်ဂျယ်ရမီသည်ဒုတိယတန်းတွင်သာတက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ၏ဆရာဒေါ်ရစ်မီလာသည်သူနှင့်မကြာခဏအပူတပြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့အပေါ်ချော်
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်သမ္မာကျမ်းစာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဖတ်ရှုခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ အကျွမ်းတ ၀ င်အခန်းငယ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်နွေးထွေးသောစောင်တစ်ထည်ကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုခြုံမိခြင်းသည်ကောင်း၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအရာရာကိုလျစ်လျူရှုစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုသတိရှိသောမျက်လုံးများနှင့်ရှုထောင့်သစ်မှဖတ်ပါကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုမြင်နိုင်ရန်နှင့်မေ့လျော့သောအရာများကိုသတိရရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီနိုင်သည်။
“ ငါ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုဘုရားသခင်ဘာလို့မကြားတာလဲ။ ” အကြောင်းပြချက်ကောင်းရှိရမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်သူဆုတောင်းသကဲ့သို့ဆုတောင်းခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အဖြေပေးသောဆုတောင်းချက်များအတွက်ကျမ်းစာလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ ငါနောင်တမရသောငါ့ဘဝ၌အပြစ်များရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခရစ်တော်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်၌တစ်သက်လုံးနေမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းချက်များသည်ဖြေကြားရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းဒါကယုံကြည်ခြင်း၏မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဆုတောင်းနေစဉ်ဖြစ်ပျက် ...
ခရီးသွားခြင်း - မမေ့နိုင်သောအစားအစာများ
ခရီးသွားသူများစွာသည်များသောအားဖြင့်ကျော်ကြားသောအထင်ကရနေရာများကိုသူတို့၏ခရီးစဉ်၏ထင်ရှားသောအမှတ်အသားအဖြစ်မှတ်မိကြသည်။ သင်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်၊ ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်လုပ်တယ်၊ သူတို့သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆွေမျိုးများကသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရာများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုပြောပြသည်။ ငါ့သားကမတူဘူး သူ့အဘို့, ခရီးစဉ်၏အမြင့်အချက်များအစားအစာများဖြစ်ကြသည်။ သူသည်ညစာတိုင်းကိုအတိအကျဖော်ပြနိုင်သည်။ သူသည်ကောင်းသောအစာအမျိုးမျိုးကိုအမှန်ပင်နှစ်သက်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည်…
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သမီးက“ အမေ၊ ကြောင်ကိုအသားအရေလှပစေတဲ့နည်းတစ်နည်းထက်မကရှိသလား” ဟုငါ့ကိုမကြာသေးမီကမေးမြန်းခဲ့သည်။ ငါရယ်တယ် သူမကဒီစကားစုကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကိုသူသိသည်။ သို့သော်သူမထိုဆင်းရဲသောကြောင်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းအမှန်ရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့တစ်လမ်းထက်ပိုသောများသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့အရာတွေပြီးမြောက်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာငါတို့အမေရိကန်တွေက "ကောင်းမွန်သောအဟောင်းအမေရိကန်ပါရမီရှင်" ကိုယုံကြည်တယ်။ ပြီးတော့ငါတို့မှာclichéရှိတယ်။
“ မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည် Tammy ပါ။ ကျွန်တော်ကဥပဒေပညာရှင်ပါ။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ မိနစ်ကကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ် ဦး အားကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲရှုံ့ချခဲ့သည်။ "Anonymous Legalists" (AL) ၏အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်လည်းကျွန်ုပ်သည်အလားတူနည်းလမ်းကိုမိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ ငါဆက်လက်သွားနှင့်ငါသေးငယ်တဲ့အမှုအရာနှင့်အတူစတင်ပုံကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မယ် ငါမောရှေပညတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အထူးဖြစ်ခဲ့သည်ထင်။ ဒီလိုမျိုးယုံကြည်မှုမရှိတဲ့လူတွေကိုငါဘယ်လိုစပြီးကြည့်တော့မှာလဲ။
ကလေးဘဝတုန်းကငါ့ရဲ့ဝမ်းကွဲတွေနဲ့အတူအဘွားရဲ့ခြံမှာနေခဲ့တယ်။ ရေကန်ကိုဆင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုငါတို့ရှာဖွေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီမှာပျော်စရာကောင်းတာကငါတို့ဖားတွေဖမ်းမိ၊ ရွှံ့ထဲလှဲချလိုက်တယ်။ အိမ်သို့ရောက်သောအခါသဘာဝအမှိုက်များနှင့်လောင်ကျွမ်းနေသောလူကြီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့ထွက်ခွာပုံနှင့်အလွန်ကွဲပြားသည်။ ရေကန်များမှာများသောအားဖြင့်ရွှံ့များ၊ ရေညှိများ၊
လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောအချိန်ကိုဖော်ပြရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စကားလုံးများသုံးကြသည်။ "premodern", "modern" သို့မဟုတ် "postmodern" ဟူသောစကားလုံးများကိုသင်ကြားဖူးပေလိမ့်မည်။ အမှန်စင်စစ်အချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ယခုခေတ်သစ်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကိုအသက်ရှင်နေထိုင်ရန်အချိန်ဟုခေါ်ကြသည်။ လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များသည်မျိုးဆက်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးအတွက် "Builders"၊ "Boomers", "Busters", "X-ers", "Y-ers", "Z-ers" များအတွက်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုအဆိုပြုထားသည်။ ..
သင့်ကိုသေးငယ်ပြီးအရေးမပါဟုခံစားရစေသည့်လူအုပ်ကြီးတွင်သင်ပါဝင်ဖူးပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးကြမ်းပြင်ပေါ်ကလူတွေဟာ bug တွေလိုသေးငယ်တာကိုသတိထားမိလား။ တခါတရံဘုရားသခင့်အမြင်တွင်ကျိုင်းကောင်များခုန်နေသကဲ့သို့ကျိုင်းကောင်များနှင့်တူသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဟေရှာယ ၄၀း၂၂-၂၄ ၌ဘုရားသခင်က“ သူသည်မြေကြီးစက်ဝိုင်းပေါ်၌ထိုင်တော်မူ။ မြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတို့သည်ကျိုင်းကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ မိုlike်းကောင်းကင်ကိုမျက်နှာကြက်ကဲ့သို့ကြက်တော်မူထသော၊